● Made in USA kungenziwa egcizelele. Singenza noma yini ofuna
Ulimi: IsiZulu / Korean
Okufakiwe: FPP nokudayisa
Microsoft Office 2016 Standard Ireland Original 1User 1SP Ukufakwa DVD futhi Key Card
Amagama Key: Ihhovisi 2016 standard, 2016 ejwayelekile,
Ubuncane Order Ubuningi:
Factory afakwe ezimvilophini ibhokisi nokudayisa
100, 000 PC / Inyanga
Microsoft Office 2016 kukusiza ukuba wenze umsebenzi wakho omkhulu - kuphi, nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma ubani. Okusha, zesimanje Classic ideskithophu izicelo, Word, Excel, PowerPoint, ku-Outlook, OneNote, kuthiwa eyakhelwe ukukhiqiza esiphezulu. Uzoba ngokushesha ukukhiqiza imibhalo professional izici igunya ocebile, Izilawuli design Izakhiwo pixel-ephelele namathuluzi enembile ukukusiza wenze iningi idatha yakho. Uzoba nokufinyelela kumadokhumenti wakho efwini noma nini uwadinga. Nge amadokhumenti wakho ku-intanethi, kulula ukuthola ithimba lakho ekhasini elilodwa. Abelana, wamanje ubambisana nabanye emisebenzini ethize akhelwe ngaphakathi e amathuluzi ithimba lomhleli yonkana suite.
Iprosesa: 1 gigahertz (GHz) noma ngokushesha x86 noma x64-bit processor nge SSE2
Isistimu: Windows 7 noma kamuva, i-windows Server 2008 R2, noma i-Windows Server 2012
Memory: 1 GB RAM (32 bhithi); 2 GB RAM (64 bhithi)
Hard Disk Space: 3.0 GB etholakalayo sediski
Bonisa: 1024 × 576 isixazululo
Graphics: Imifanekiso hardware kudinga IDirectX 10 ihluzo ikhadi
Multi-touch: Idivayisi touch-inikwe amandla liyadingeka ukusebenzisa noma isiphi ukusebenza multi-touch. Nokho, zonke izici nokusebenza bekulungele ngokusebenzisa, igundane, noma enye idivayisi ikhibhodi evamile noma kufinyeleleke input. Qaphela ukuthi izici ezintsha touch zithuthukuselwe ukusetshenziswa ne-Windows 8 noma kamuva.
Izidingo engeziwe: ukusebenza Inthanethi kudinga inthanethi. akhawunti ye-Microsoft kudingeka.
Okulandelayo: Office 2016 HS
Microsoft Office 2013 Standard 1User Faka ...